Mobile World Congress (MWC 2018) မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိပ်တန်း မိုဘိုင်းလ် trend တွေက? – DigitalTimes.com.mm
255 Shares 91 Views
Mobile World Congress (MWC 2018) မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိပ်တန်း မိုဘိုင်းလ် trend တွေက?
ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Mobile World Congress (MWC) 2018 ပွဲကြီးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဒီနှစ်ကျန်တဲ့ကာလတစ်လျှောက် ဘယ်လိုဖုန်းတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေတော့ သိရပါပြီ။ ဒါဆို MWC ပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ထဲကမှ ဒီနှစ်ရဲ့မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေ trend က ဘာတွေဖြစ်မလဲကြည့်ရအောင်.
သူကတော့ ဒီနှစ်မှစတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ကတည်းက Mi Mix မှာ bezel-less စဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုဆို Apple လည်း iPhone X ကို ဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်းပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ ဘောင်တွေကိုလျှော့ချလိုက်ပြီး ဖုန်းရဲ့ဆိုဒ်ကိုသေးလိုက်ပေမယ့် screen ဆိုဒ်ကတော့ ပိုကြီးလာပါတယ်။ ဥပမာ iPhone X ဆိုရင် iPhone 8 Plus ထက်ပိုသေးပေမယ့် screen size ပိုကြီးပါတယ်။
အရင် 16:9 ratio အစား 18:9 ratio ဖြစ်လာတဲ့အတွက် နေရာပိုကျယ် content ပိုများများပြနိုင်လာတဲ့အပြင် split-screen mode သုံးတဲ့အခါမှလည်း နေရာပိုရပါတယ်။ ခုဆို mid-range ဖုန်းတွေ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေတောင်မှ 18:9 ratio ကိုပြောင်းလာကြပါပြီ။ ဆိ်ုတော့ ဒီနှစ်ဖုန်းတွေရဲ့ trend ကတော့ full-screen, 18:9 ratio, bezel-less ဒီဇိုင်းပါ။
Full-screen ထားချင်တဲ့အခါ ထိပ်ဖက်မှာရှိတဲ့ ကင်မ၇ာတွေ sensor တွေထားဖို့အတွက် notch လေးကို နေရာပေးလာရပါပြီ။ iPhone X မှာဆို သူ့ရဲ့ Animoji, FaceID တို့အလုပ်လုပ်ဖို့ TrueDepth ကင်မရာတွေ sensor တွေကိုထားဖို့ notch နေရာလေးပေးထားတာတွေ့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုပဲ feature သစ်တစ်ခုအနေနဲ့ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေ တုပလာကြပြီး MWC ပွဲမှာ ထိပ်ဖက် notch နဲ့ဖုန်းတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Samsung လို ထိပ်ဖက် notch မထား တပြေးတည်းအနက်ရောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲ Apple ကိုပဲတုပလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ notch ဒီဇိုင်းနဲ့မတူဘဲ ခွဲထွက်လာတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ Vivo ဆိုရင် ကင်မရာကိုဖုန်းရဲ့ထိပ်ဖက်ကနေ ထွက်လာတာမျိုး Xiaomi ဆိုရင်ရှေ့ကင်မရာကို အောက်ဘက် bezel မှာထားလိုက်တာမျိုး ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်က တော်တော်များများ notch ဒီဇိုင်းကိုတုပလာကြတာဆိုတော့ လုံးဝ bezel-less စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ အရမ်းကြီးမျှော်လင့်ထားလို့မရသေးပါဘူး။
MWC ပွဲမှာ AI ကိုလည်းအဓိကအသားပေးလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းမှာ AI ကိုထည့်သွင်းတာတွေ Samsung ဆို Bixby ကိုအဆင့်မြှင့်လာတာတွေ၊ Bixby vision အတွက် ကင်မရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ AI feature အသစ်တွေ ဒါတွေကို မိတ်ဆက်လာကြပါတယ်။ AI ကိုဖုန်းမှာ built-in အနေနဲ့ထည့်သွင်းလာတဲ့ Google, Apple, Samsung တို့တွေအပြင် နောက်ထပ်ဘယ်ဖုန်းတွေမှာများ ထည့်လာဦးမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ရဦးမှာပါပဲ။
AI အပြင် MWC ပွဲမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ကြသေးတာက ရှိသင့်တဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AR feature တွေပါ။ ZTE Blade V9 စမတ်ဖုန်းဆိုလည်း AR စတစ်ကာတွေကို ကင်မရာ app မှာထည့်သွင်းလာပြီး Apple Animoji တွေလို Galaxy S9 မှာလည်း AR Emojis တွေကိုထည့်သွင်းလာခဲ့ပါပြီ။ Animoji လောက်ကြီး မကောင်းသေးပေမယ့်လည်း နောက်နှစ်တွေမှာတော့ ဒီထက်ပိုတိုးတက်လာမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ မှန်းမိသလောက်ကတော့ ၂၀၁၈ ရဲ့ဖုန်းတိုင်းနီးပါးလောက်မှာ AR အတွက် ကဏ္ဍတစ်ခုပါဝင်လာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မနှစ်က Huawei ကနေ Huawei Watch2ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် ၂၀၁၈ မှာတော့ ဘာစမတ်နာရီမှ မိတ်ဆက်တာမတွေ့ရပါဘူး။ ဒီစမတ်နာရီပိုင်းကတော့သိပ်ပြီးဆန်းသစ်တီထွင်စရာမရှိလို့ပဲ ဆက်မလုပ်ကြသေးတာလား? Google ကတော့ ဒီနှစ် developer conference မှာ Android Wear တွေကို အဆင့်မြှင့်ထားတယ်ပြောလာပေမယ့်လည်း ဒီကဏ္ဍပိုင်းကတော့ သိပ်ပြီးထူးထူးခြားခြားကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့တော့ မထင်မိပါဘူး။
Budget and feature phones
ပြောရရင် ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေက တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကိုပိုပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ display တွေလည်း ဘေးဘောင်တွေပါးလာ အမြင့်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့နည်းပညာတွေကို တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းတွေမှာပါ ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ HMD Global ရဲ့ $345 တန် Nokia6လေးဆိုရင် တည်ဆောက်ဖန်တီးထားတာလေးလည်းတော်တော်ကောင်းပြီး နည်းပညာတွေလည်း အများကြီးပါပါတယ်။ ဒီနှစ် MWC ပွဲမှာ Google မိတ်ဆက်လိုက်တာကတော့ Android Go ဖုန်းတွေပါ။ RAM နည်းနည်း Storage နည်းနည်းနဲ့ဖုန်းတွေအတွက် နေရာနည်းနည်းပဲယူမယ့် Operating System ကိုသုံးထားပြီး $100 အောက်ပဲရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက feature ဖုန်းတွေပါ အဆင့်မြင့်လာတာပါ။ Nokia ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Nokia 8110 ဆို အခု 4G feature ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီဖုန်းတွေက touchscreen စမတ်ဖုန်းတွေထက် ဈေးပိုပေါပြီး ဒေတာပမာဏလည်း နည်းနည်းလေးပဲလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လို feature ဖုန်းတွေအတွက် Google Maps, Google Assistant, Facebook စတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပါသုံးလို့ရမယ့် KaiOS ဆိုတဲ့ operating system ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ဈေးကြီးတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေထက် feature ဖုန်းတွေက တစ်ပန်းသာလာဦးမလား မပြောတတ်ပါဘူး။
မျိုးဆက်သစ် 5G ချိတ်ဆက်မှုတွေကတော့ တော်တော်ကိုမြန်လွန်းတဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပါပဲ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဌာနတွေနဲ့ စက်ရုံတွေမှာသုံးရင် တော်တော်အကျိုးများမှာပါ။ ဒါပေမယ့် US လိုနိုင်ငံမှာတောင် 5G ပေးနိုင်တဲ့ carrier တွေက ဒီနှစ်ကုန်ရင်တောင် သိပ်မရှိနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၉ မတိုင်ခင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ 5G ချိတ်ဆက်မှုတွေရကောင်းရလာနိုင်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာမှာကငျြးပခဲ့တဲ့ Mobile World Congress (MWC) 2018 ပှဲကွီးလညျးပွီးသှားပွီဆိုတော့ ဒီနှဈကနျြတဲ့ကာလတဈလြှောကျ ဘယျလိုဖုနျးတှမြှေျောလငျ့လို့ရမလဲဆိုတဲ့ အခကျြအလကျလေးတှတေော့ သိရပါပွီ။ ဒါဆို MWC ပှဲမှာပွသခဲ့တဲ့ထဲကမှ ဒီနှဈရဲ့မိုဘိုငျးလျဖုနျးတှေ trend က ဘာတှဖွေဈမလဲကွညျ့ရအောငျ.
သူကတော့ ဒီနှဈမှစတာမဟုတျပါဘူး။ ၂၀၁၆ ကတညျးက Mi Mix မှာ bezel-less စဖွဈခဲ့ပွီး အခုဆို Apple လညျး iPhone X ကို ဘောငျမဲ့ဒီဇိုငျးပွောငျးလိုကျပါပွီ။ ဘောငျတှကေိုလြှော့ခလြိုကျပွီး ဖုနျးရဲ့ဆိုဒျကိုသေးလိုကျပမေယျ့ screen ဆိုဒျကတော့ ပိုကွီးလာပါတယျ။ ဥပမာ iPhone X ဆိုရငျ iPhone 8 Plus ထကျပိုသေးပမေယျ့ screen size ပိုကွီးပါတယျ။
အရငျ 16:9 ratio အစား 18:9 ratio ဖွဈလာတဲ့အတှကျ နရောပိုကယျြ content ပိုမြားမြားပွနိုငျလာတဲ့အပွငျ split-screen mode သုံးတဲ့အခါမှလညျး နရောပိုရပါတယျ။ ခုဆို mid-range ဖုနျးတှေ ဘတျဂတျြဖုနျးတှတေောငျမှ 18:9 ratio ကိုပွောငျးလာကွပါပွီ။ ဆျိုတော့ ဒီနှဈဖုနျးတှရေဲ့ trend ကတော့ full-screen, 18:9 ratio, bezel-less ဒီဇိုငျးပါ။
Full-screen ထားခငျြတဲ့အခါ ထိပျဖကျမှာရှိတဲ့ ကငျမ၇ာတှေ sensor တှထေားဖို့အတှကျ notch လေးကို နရောပေးလာရပါပွီ။ iPhone X မှာဆို သူ့ရဲ့ Animoji, FaceID တို့အလုပျလုပျဖို့ TrueDepth ကငျမရာတှေ sensor တှကေိုထားဖို့ notch နရောလေးပေးထားတာတှမှေ့ာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကိုပဲ feature သဈတဈခုအနနေဲ့ စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတှေ တုပလာကွပွီး MWC ပှဲမှာ ထိပျဖကျ notch နဲ့ဖုနျးတှကေိုတျောတျောမြားမြားတှခေဲ့ရပါတယျ။ Samsung လို ထိပျဖကျ notch မထား တပွေးတညျးအနကျရောငျမြိုးမဟုတျဘဲ Apple ကိုပဲတုပလာကွတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကံကောငျးစှာနဲ့ပဲ notch ဒီဇိုငျးနဲ့မတူဘဲ ခှဲထှကျလာတဲ့ဒီဇိုငျးတှလေညျးရှိနပေါသေးတယျ။ Vivo ဆိုရငျ ကငျမရာကိုဖုနျးရဲ့ထိပျဖကျကနေ ထှကျလာတာမြိုး Xiaomi ဆိုရငျရှကေ့ငျမရာကို အောကျဘကျ bezel မှာထားလိုကျတာမြိုး ဒီလိုဒီဇိုငျးလေးတှရှေိနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈက တျောတျောမြားမြား notch ဒီဇိုငျးကိုတုပလာကွတာဆိုတော့ လုံးဝ bezel-less စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈဖို့ အရမျးကွီးမြှျောလငျ့ထားလို့မရသေးပါဘူး။
MWC ပှဲမှာ AI ကိုလညျးအဓိကအသားပေးလာကွတာတှရေ့ပါတယျ။ ကငျမရာပိုငျးမှာ AI ကိုထညျ့သှငျးတာတှေ Samsung ဆို Bixby ကိုအဆငျ့မွှငျ့လာတာတှေ၊ Bixby vision အတှကျ ကငျမရာနဲ့ဆိုငျတဲ့ AI feature အသဈတှေ ဒါတှကေို မိတျဆကျလာကွပါတယျ။ AI ကိုဖုနျးမှာ built-in အနနေဲ့ထညျ့သှငျးလာတဲ့ Google, Apple, Samsung တို့တှအေပွငျ နောကျထပျဘယျဖုနျးတှမှောမြား ထညျ့လာဦးမလဲဆိုတာ စောငျ့မြှျောရဦးမှာပါပဲ။
AI အပွငျ MWC ပှဲမှာမိတျဆကျခဲ့ကွသေးတာက ရှိသငျ့တဲ့ feature တဈခုဖွဈတဲ့ AR feature တှပေါ။ ZTE Blade V9 စမတျဖုနျးဆိုလညျး AR စတဈကာတှကေို ကငျမရာ app မှာထညျ့သှငျးလာပွီး Apple Animoji တှလေို Galaxy S9 မှာလညျး AR Emojis တှကေိုထညျ့သှငျးလာခဲ့ပါပွီ။ Animoji လောကျကွီး မကောငျးသေးပမေယျ့လညျး နောကျနှဈတှမှောတော့ ဒီထကျပိုတိုးတကျလာမယျလို့တော့ ထငျပါတယျ။ မှနျးမိသလောကျကတော့ ၂၀၁၈ ရဲ့ဖုနျးတိုငျးနီးပါးလောကျမှာ AR အတှကျ ကဏ်ဏ္ဍတဈခုပါဝငျလာမယျလို့တော့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
မနှဈက Huawei ကနေ Huawei Watch2ကိုမိတျဆကျခဲ့ပွီး ဒီနှဈ ၂၀၁၈ မှာတော့ ဘာစမတျနာရီမှ မိတျဆကျတာမတှရေ့ပါဘူး။ ဒီစမတျနာရီပိုငျးကတော့သိပျပွီးဆနျးသဈတီထှငျစရာမရှိလို့ပဲ ဆကျမလုပျကွသေးတာလား? Google ကတော့ ဒီနှဈ developer conference မှာ Android Wear တှကေို အဆငျ့မွှငျ့ထားတယျပွောလာပမေယျ့လညျး ဒီကဏ်ဏ္ဍပိုငျးကတော့ သိပျပွီးထူးထူးခွားခွားကွီးတိုးတကျလာမယျလို့တော့ မထငျမိပါဘူး။
ပွောရရငျ ဘတျဂတျြဖုနျးတှကေ တဈနှဈထကျတဈနှဈကိုပိုပိုကောငျးလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ display တှလေညျး ဘေးဘောငျတှပေါးလာ အမွငျ့ပိုငျးဖုနျးတှမှောတှရေ့တဲ့နညျးပညာတှကေို တနျဖိုးသငျ့ဖုနျးတှမှောပါ ထညျ့သှငျးလာကွပါတယျ။ HMD Global ရဲ့ $345 တနျ Nokia6လေးဆိုရငျ တညျဆောကျဖနျတီးထားတာလေးလညျးတျောတျောကောငျးပွီး နညျးပညာတှလေညျး အမြားကွီးပါပါတယျ။ ဒီနှဈ MWC ပှဲမှာ Google မိတျဆကျလိုကျတာကတော့ Android Go ဖုနျးတှပေါ။ RAM နညျးနညျး Storage နညျးနညျးနဲ့ဖုနျးတှအေတှကျ နရောနညျးနညျးပဲယူမယျ့ Operating System ကိုသုံးထားပွီး $100 အောကျပဲရှိပါတယျ။
နောကျတဈခုက feature ဖုနျးတှပေါ အဆငျ့မွငျ့လာတာပါ။ Nokia ကမိတျဆကျခဲ့တဲ့ Nokia 8110 ဆို အခု 4G feature ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာပါပွီ။ ဒီဖုနျးတှကေ touchscreen စမတျဖုနျးတှထေကျ ဈေးပိုပေါပွီး ဒတောပမာဏလညျး နညျးနညျးလေးပဲလိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လို feature ဖုနျးတှအေတှကျ Google Maps, Google Assistant, Facebook စတဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှပေါသုံးလို့ရမယျ့ KaiOS ဆိုတဲ့ operating system ကိုမိတျဆကျလိုကျပွီဆိုတော့ ဈေးကွီးတဲ့ စမတျဖုနျးတှထေကျ feature ဖုနျးတှကေ တဈပနျးသာလာဦးမလား မပွောတတျပါဘူး။
မြိုးဆကျသဈ 5G ခြိတျဆကျမှုတှကေတော့ တျောတျောကိုမွနျလှနျးတဲ့အငျတာနကျအမွနျနှုနျးပါပဲ။ ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့ဌာနတှနေဲ့ စကျရုံတှမှောသုံးရငျ တျောတျောအကြိုးမြားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ US လိုနိုငျငံမှာတောငျ 5G ပေးနိုငျတဲ့ carrier တှကေ ဒီနှဈကုနျရငျတောငျ သိပျမရှိနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၁၉ မတိုငျခငျတဈခြိနျခြိနျမှာ 5G ခြိတျဆကျမှုတှရေကောငျးရလာနိုငျပါတယျ။
Microsoft က Surface Pro LTE ကို ရောင်းပြီ